Pakistane Mpanao Kanto Mahatsiaro An’i Sabeen Mahmud Sy Ny Fanentanana Nataony Ny Andron’ny Mpifankatia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Febroary 2016 5:48 GMT
Aleo hisy fitiavana #PyarHoneDeiN: Mahatsiaro an'i Sabeen Mahmud. Sary nomen'i Alia Chughtai maimaimpoana
Avy tamin'i Soofia Mahmood
Mijery ny alimanakan'ny birao aho ato ary mahamarika fa voarakitra ho daty manan-danja aty Kanadà ny Andron'ny Mpifankatia, ny firenena nosafidiako, izay nifindrako avy tany Pakistàna tamin'ny taona lasa. Milaza izao ilay alimanaka, “fahafahana ho an'ireo olona any Kanada milaza amin'ny olona hafa fa tia azy izy ireo, amin'ny fomba malefaka sy feno ftiavana, ny andron'ny Mpifankatia”. Mieritreritra momba an'i Pakistàna aho, ny fireneko, ary mitsiky amin'ilay toa fanesoana.
Nanameloka ny andron'ny Mpifakantia ny filohan'ny Repoblika Silamo an'i Pakistan, Mamoon Husain, ary nangataka ny tsy hanamarihan'ireo olompirenen'ny fireneny azy io—tsy manana alàlana hitia olona eny imasom-bahoaka ianao, na any amin'ny takona mitokana aza! Tonga taorian'ny nandraràn'i Kohat, distrika iray any avaratra-andrefana , faritany Pakistane ao Khyber Pakhtunkhwa, ny fankalazana ny Andron'ny Mpifankatia ilay fanamarihan'ny filoha. I Imran Khan ilay mpilalao cricket lasa mpanao politika, avy amin'ny liberaly lasa no any amin'ny antoko politika afovoany, Pakistan Tehreek-e-Insaaf no mitondra ao amin'io faritany io.
Mieritreritra ny amin'i Sabeen Mahmud aho, Pakistane mpikatroka mafana fo sady mpiasan'ny Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, izay nanao ny fanentanany manokana nanoherana ny fibahanan'ireo mpitarika fivavahana mpitàna ny nentin-drazana ny Andron'ny Mpifankatia, teo ambanin'ny teny faneva hoe “Pyaar hone dein” (Aleo hisy fitiavana).
Nihaona voalohany tamin'i Sabeen aho ny taona 2013 tany Bangkok, tamin'ny fakànkevitra rezionaly mikasika ny Fahalalahan'ny Fitenenana ho an'ny Fahalalahana Sivily any Azia, nokarakarain'ny fikambanana mpiaro ny zon'olobelona Bytes for All. Tamin'ilay fivoriana, noresahany ny lohahevitry ny fahalalahan'ny fitenenana, zo izay arovany fatratra maimaimpoana ary niasàny — ary namoizany ny ainy ny Aprily 2015.
Tsaroako tsara mihitsy i Sabeen miresaka ny fibahanana ny YouTube tany Pakistàna. Nino izy fa ny fanivanana ireo fitaovana toy ny YouTube dia setroka mainty ampiasain'ny governemanta, izay matahotra ireo olona mampiasa ny media sosialy. Mpiaraka nanorina ny fandraisana andraikitra ivondronan'ny olompirenena, antsoina hoe “Pakistan for All” (Pakistàna ho an'ny Rehetra) izy. Niaraka tamin'ireo mpiray asa taminy, nanao fanentanana isankarazany nitakiana ny zon'ireo olompirenena mba ho afaka miditra amin'ireo sehatra toy ny YouTube. Ny iray amin'ireo fanentanan-dry zareo ny “Hugs for YouTube”, lasa nalaza be tamin'ny Aterineto. Miaraka amin'ny olan'ny fitomboan'ny fitenenana feno fankahalàna, namorona ny NAFRAT Aggregator (“nafrat” midika hoe “fankahalàna” amin'ny teny Urdu) ihany koa ny Pakistan for All, mba hanangonana ireo ohatra amin'ny kabary feno fankahalàna.
Nihomehy sy be resaka i Sabeen fony niresaka tamin'ny gazetiboky Wired momba ny nisian'ny fandrahonana ho faty avy tamin'ireo mpitàna ny nentin-drazana tamin'ny diaben'ny Andron'ny Mpifankatia nataony tany Karachi:
“. . . indray andro, vantany vao nipoitra fotsiny ilay resabe, notenenina tsy handeha ho any amin'ny biraony izy ho fiarovana ny tenany manokana. Fony nihiboka tao an-trano, naneno misesisesy in-efatra ny lakolosim-baravarana. “Noraisiko ny hazon'ny cricket-ako,” hoy izy, “nefa natahotra loatra hamaly ilay fandondonana tamin'ny varavarana.” Rehefa hita fa hay lehilahy mpanatitra zavatra fotsiny ilay izy, “somary diso fanantenana ihany” izy.
Nanoratra eo amin'ny bilaoginy ilay Pakistane mpitoraka bilaogy Harron Riaz:
Nisy hafatra somary mahatsikaiky manindrahindra ny fitiavana ny fanentanana (an'i Sabeen), toy ny “Pyaar Hone De” na tsy manalavitra ny hoe ‘Let there be love’ (Aleo hisy Fitiavana), teo anoloan'ireo hafatra an-takelaka avy amin'ny hetsik'ireo mpitarika fivavahana mandràra ny fankalazàna ny Andron'ny Mpifankatia, mitanisa ireo andinin-tsoratra masina sy ireo fomba nentim-paharazana. Nisy fotoana izy tsy maintsy niafina nandrapahitan'ireo Silamo zavatra hafa ho tsikeraina mikasika indray.
Mahery kelin'ny roa taona taorian'ny nanaovany ny fanentanany momba ny Andron'ny Mpifankatia, nisy namono i Sabeen. Ny iray tamin'ireo mpamono azy, Saad Azia — lehilahy tanora mpianatra avy tamin'ny Institute of Business Administration (IBA) ao Karachi — nilaza tao anatin'ny fibabohany fa ny hetsiky ny Andron'ny Mpifankatia izay nataony no heloka novidiany lafo satria ” Manohitra ny fisainana Silamo”.
“Tsy afaka miady amin'ny fotokevitry ny fivavahana ianao. Tena faran'izay goavana ilaina atrehana amin'ny alalan'ny resaka atao na fiteny mitondra famoronana io. Tena fambara loza loatra toa tsy hahazoana fandresena izany. Faniriako raha mba nahalala izany i Sabeen.”
Aty Kanada, daty amin'ny alimanaka tsotra fotsiny ny Andron'ny Mpifankatia. Afaka misafidy ny hankalaza io na tsy hiraharaha azy ny olona. Mety ho fialantsiny tsara indrindra hividianana zavatra betsaka io, na antony ahatsapàna hoe tiana, na tsy tiana. Tsy resaka hoe tsara na ratsy io, fifikirana mafy amin'ny finoana na helo, fiainana na fahafatesana.
Mampahatsiaro ahy ny hoe nahoana aho no niala tany amin'ny Repoblika Silamon'i Pakistàna ny fahatsiarovana toy ireny. Tsy afaka miady amin'ny fotokevitry ny fivavahana ianao. Tena faran'izay goavana ilaina atrehana amin'ny alalan'ny resaka atao na fiteny mitondra famoronana io. Tena fambara loza loatra toa tsy hahazoana fandresena izany.
Faniriako raha mba nahalala izany i Sabeen.
Pakistane mpanao kanto mipetraka any Toronto, Kanadà, ankehitriny i Soofia Mahmood. Mino izy fa hanampy azy hahatakatra ny fifandraisana misy amin'ny tena sy ny rehetra manodidina anao, ny zavatra rehetra hitany tamin'ny alalan'ny fakàntsariny. Jereo ny asan'i Sfia ao amin'ny www.soofiasays.com